Ifulethi elitofotofo kwindawo ezolileyo nentle
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguPeder
Ifulethi elihle kwaye lixhotyiswe kakuhle kwindawo ebukekayo. Imizuzu emi-5 ngemoto esuka kwiziko leSvolvær, kodwa isekwindawo ezolileyo nenoxolo. Iintaba ezinkulu zinyuka ngqo ukusuka eyadini, amanzi amahle okuhlamba akufutshane kunye neendlela ezintle zebhayisekile ezikhuselekileyo kwindawo.
Ukubakho kweebhedi ezi-5 (2 + 1 kunye no-2):
- Igumbi lokulala: ibhedi ye-140cm kunye nokubakho kwebhedi eyongezelelweyo.
-Igumbi lokuhlala: 120cm ibhedi eshukumayo.
Ipaseji enegumbi lokufudumeza eliphantsi, isomisi sezihlangu kunye nekhabhathi yokomisa. Iphelele kubantu abasebenzayo.
! Min 3 ubusuku.
! Inja enobubele kunye nekati kwindlu enkulu.
Ipropathi ibekwe yodwa kwihlathi elincinci apho uya khona entsimini okanye entabeni. Igadi ibekelwe bucala kwaye inendawo yokutyela kunye nebarbecue.
Amagumbi alula kwaye anomoya. Ikhitshi elitsha elisebenzayo nelixhotyiswe kakuhle. Ikhitshi / igumbi lokuhlala linebhedi yebhedi, onokuthi uyisonge phantsi xa ufuna iibhedi ezininzi (ubukhulu be-5).
Ngaphandle koko, igumbi lineofisi / indawo yokusebenza, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba kunye neholo elikhulu elinobushushu obuphantsi kunye nekhabhathi yokomisa.
Indlu kunye nendlu zibekwe zodwa, ngoko nangoko apho umendo ungena entsimini okanye entabeni. Kwindawo esondeleyo kukho indawo yokuhlala entle enezixhobo zemidlalo kunye neendlela zokuhamba. Iivenkile apho ufumana uninzi lwesixeko esincinci, uya kufumana eSvolvær, malunga ne-20 min ukuhamba. Zininzi iindawo zokutyela ezilungileyo kunye neminikelo yenkcubeko.
Abadlali abaninzi banikezela ngohambo oluya eTrollfjord kunye nokhozi safaris ukusuka kwisikwere eSvolvær. EKabelvåg 4.5 km ukusuka eSvolvær, kukho i-aquarium enkulu, iimyuziyam kunye neegalari. Ubuncinci isikwere esimnandi kakhulu.
Indawo egqibeleleyo yokuqalisa imisebenzi yasebusika njengokuhamba intaba / ukutyibiliza intaba, irandone kunye ne-off-piste, ukutyibilika kwe-alpine kunye nokuhamba ngekhephu. Kwaye iiskis zinokufakwa ngokukhawuleza ngaphandle kwendlu. Kungenjalo, zininzi iindlela zokufumana iinketho zokunyuswa encotsheni ngerandone ngaphakathi kwe-30 min radius ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Peder